အကြင်နာနန်းတော်: Cbox မှာရုပ်ပြောင်လေးတွေ ထည့်ချင်ရင်။
Cbox မှာရုပ်ပြောင်လေးတွေ ထည့်ချင်ရင်။
31 May 11, 08:53 AM
nine d: စီဘောက်မှ Smile အရုပ်လေးတွေကို ကျွန်တော့်ဘလော့ စီဘောက်မှာ တင်ချင်တယ်။ နည်းလမ်းလေးပေးပါဦး.။
***ဧကရီ*** c box မှာ smiles ပုံလေးတွေ ထည့်ချင်တဲ့ nine.d အတွက် ဖြေပေးလိုက်ပါပြီနော်.
Cbox မှာ ရုပ်ပြောင်လေးတွေ ထည့်သုံးချင်တဲ့ Blogger တွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
Cbox ရဲ့ အောက် smilies ဆိုတာလေး နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ
၁။ ။Cbox အကောင့်ကို ဒီနေရာမှာ ကလစ်ပါ ပြီးရင် Sign In အရင်ဝင်လုပ်ပါ ။
၂။ ။၀င်ပြီးရင် Home- Publish!- Loos & Feel- Options- Users & Access- Messages
တွေ့ရပါလိမ်မယ် အဲထဲက Options ==> Smilies ဆိုတာလေး ရွှေးကလစ်လိုက်ပါ။
Code Alt. code URL
အဲဒါလေးတွေ တွေ့ရပါလိမ်မယ်။ Code ဆိုတဲ့စလုံးအောက်အကွက်လေးမှာ ပေါ်ချင်တဲ့ပုံရဲ့ စာသားရေးထည့်ပါ။
၄။ ။ Alt.code ဆိုတဲ့အောက်နေရာမှာ Shortcut အနေနဲ့ သုံးမဲ့အတိုကောက်စလုံးထည့်ပါ။
(Code နဲ့ Alt.code ဆိုတဲ့နေရာမှာ မရှင်းလင်းဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုလုပ်ဗျာ Code နဲ့ Alt.code နှစ်နေရာကို Code နေရာမှာပဲ a.b.c.d. အစရှိတဲ့ အက္ခရာစလုံးလေးတွေကြိုက်သလို သုံးလိုက်ပါ။
တစ်ခုရှိတယ်နော် ရေးတဲ့စလုံးရဲ့ရှေ့ မှာ : အဲလိုလေး ထည့်အုံး ပုံလေးတွေမပေါ်ပဲနေမယ် .
၅။ ။ URL ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ Smilies ပုံရဲ့  URL ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်အကောင့် ဖွင့်တုန်းက ပေးထားတဲ့ ပုံလေး ဆက်သုံးခြင်တယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းထားပါ။
မသုံးခြင်ဘူး ဆိုရင် Del ပါပါတယ် ဖျက်လိုက်ပါ။
၆။ ။ နောက်ထပ်ထည့်လိုတဲ့ လင့်လေးတွေအတွက်
New Row ကိုနှိပ်ပြီး လိုအပ်သလောက် ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထည့်ပြီးရင်တော့ Save လိုက်ပါ။
ဒါဆို ဘလော့ဂ် ရဲ့ Cbox အောက်က Smilies လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ ရုပ်ပြောင်လေးတွေ တွေ့ရပါလိမ်မယ်။
ပုံရဲ့ URL တွေကို google မှာရှာဖွေပြီး လိုသလောက်ယူသုံးနိုင်ပါတယ်နော်။
ဒီ အောက်ကလင့်ခ်လေးတွေမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေ ရှာကြည့်ပြီးထည့်လို့ရတယ်နော်။
အောက်ကပုံ လင့်ခ်လေးတွေ လည်း လိုချင်ရင် ယူနိုင်ပါတယ်။
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Wednesday, June 01, 2011
Internet Speed ပိုမြန်အောင်လုပ်နည်းများ နှင့် ကျော...